को हो त्यो व्यक्ति जसलाई नेपालबाट अमेरिका लैजान जहाजै चार्टर गरियो ?
३ असोज, काठमाण्डौ । नेपालमा पक्राउ परेका मोस्ट वान्टेड यौन दुराचारी नाथन बेडफोर्ड माकोव्स्कीलाई लैजान अमेरिकी सरकारले विमान नै चार्टर गरेको छ । बुधबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएको अमेरिकी जहाज बिहीबार बिहान नाथनलाई लिएर फिर्ता भएको छ ।
चालक दलका सदस्यबाहेक युएस मार्सल सर्भिसका तीन सुरक्षाकर्मी नेपाल आएका थिए । अमेरिकी दूतावास स्रोतका अनुसार नाथनलाई लैजान करिब एक लाख डलर खर्च भएको छ । अमेरिकामा आफ्नै प्रेमिकाकी नाबालिका छोरीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेर नाथन फरार भएका थिए । नाथनलाई गत १८ भदौमा प्रहरीको विशेष ब्युरोले ठमेलबाट पक्राउ गरेको थियो । अध्यागमन विभागले १४ दिन थुनामा राखी उनलाई निष्कासनको निर्णय गरेको थियो । उनलाई नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको पहलमा नियमित उडानबाट अमेरिका लैजाने तयारी भएको थियो ।
नाथनलाई लैजान युएस मार्सल सर्भिसका तीन सुरक्षाकर्मी एक साताअघि काठमाडौं आइसकेका थिए । तर, २७ भदौमा कोरियन एयरको जहाज चढिसकेपछि नाथनले आत्महत्या गर्ने धम्की दिए । त्यसपछि सुरक्षाको कारण देखाएर एयरलायन्सले उनलाई लैजान मानेन । त्यसपछि अमेरिकी सरकारले उनलाई लैजान फ्लाइटवर्कस् कम्पनीको भिरएन११जिडब्लू प्लेन चार्टर्ड गरेको हो ।
बिहीबार नाथनलाई अध्यागमन विभागबाट खटिएका प्रहरीले विमानकै र्भयाङमा र्पुयाएर अमेरिकी मार्सल टोलीलाई बुझाएको शुक्रबारको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
नाथनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले रेड नोटिस जारी गरेकाले पक्राउ गरेर अध्यागमन कानुनअनुसार कारबाही गरी नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासन गरिएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले बताए ।
यी रहेछन् ‘र’ प्रमुखलाई नेपाल बोलाउने व्यक्ति !
१० मंसिर, काठमाडौं । खुफिया ऐजेन्सी ‘र’ प्रमुख सामान्त गोयललाई…
मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको उर्दी–अब घरकै चामल मगाएर खानुहोस्
२६ कात्तिक, काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण तलब आधा काटिएको…
लोक सेवा आयोगले सयौं प्राविधिक पदमा आवेदन खोल्यो
अमेरिकामा आज चुनाव हुँदै, को बन्ला त राष्ट्रपति ?
सम्पतीको लोभले बोक्सीको बाहानामा आफ्नै आमाको हत्या
एकै परिवारका १० जनामा कोरोना संक्रमण, एकको मृत्यु